'जनतामारा कर बृद्धि खारेज नगरे जनताले फ्रान्सेली क्रान्ति गर्ने '
पाेखरा । पहिचान, अधिकार र स्वाभिमानका लागि आन्दोलनरत तमुवान–मगराँत संघर्ष समितिले कर बृद्धि विरुद्ध पोखरामा बृहत जनप्रर्दशन गरेको छ।
एकीकृत सम्पत्ति करले महानगरको रजस्व बढ्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरेपछि राजस्व संकलन प्रभावकारी देखिएको छ ।
पाँचथर । पाँचथरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका हाइड्रोपावरले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर अझसम्म तिरेका छैनन् । जि एन कन्स्ट्रक्सनमार्फत् जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरले लगाएको कर ती हाइड्रोपावरले नतिरेका हुन् । जिससले खुलाएको बोलपत्र (टेण्डर) पारेर कर उठाउने जिम्मा पाएको जि एन कन्स्ट्रक्सनलाई कर नतिरेका हुन् ।
‘सरकारले अनावश्यक कर बढायो’
बैतडी । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले अनावश्यकरुपमा कर बढाएको बताएका छन् । पूर्वमन्त्री विश्वकर्माले सरकारको नेतृत्व गरेको दलले निर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनतामाथि बोझ मात्र थपेको बताए ।
बेसीसहर । बेसीसहर नगरपालिकाले हाँस, कुखुरा र अन्य पन्छीको यातायातमा २ रुपैयाँ कर लगाएको छ । नगरवासीलाई नभई बाहिरबाट बिक्री गर्न ल्याउनेलाई कर लगाएको हो ।
काठमाडौं । तपाईं साइकल चढ्नुहुन्छ ? त्यसबापत कर लाग्नेछ । खोलामा डुंगा चढेर वारिपारि गर्नुपर्नेछ ? त्यसबापत पनि कर लाग्नेछ । माछा मारेर जिन्दगी चलाउनु हुन्छ ? त्यसका लागि पनि कर तिर्नैपर्छ । सर्वसाधारणको जिन्दगी जताततै करले कष्टकर बनाउँदो छ ।
धनगढी । स्थानीय सरकार करमा कठोर बनेको समाचार आइरहेका वेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले देशलाई नै आश्चर्यमा पार्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालगन्ज । रोल्पाको माडी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष खर्कबहादुर पुनले वडाका सडक निर्माणमा यसपालि आफ्नै डोजर प्रयोग गरे । वडामा मात्र नभएर सिंगो गाउँपालिकाबाट यो विषयमा गुनासो आयो ।